Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy Spica ilaa Android 2.1 | Androidsis
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Spica ilaa Android 2.1
antocara | | Samsung, Tababarada, Noocyada Android
Sida waxaan faallo ka bixinay maalmo kahor durba waa macquul cusboonaysii Samsung Galaxy Spica ilaa Android 2.1 Taas oo ay ku kasbato waxyaabo badan oo xiiso leh oo gebi ahaanba beddelaya wejiga hadda jira ee Android. Akhriste webka ayaa fuliyay cusbooneysiinta wuxuuna naga dhigay buug yar oo ku saabsan sida loo cusbooneysiiyo qalabkan iyo dhibaatooyinka uu soo helay iyo waliba sida loo xaliyo.
Thanks Obi_alm. Halkan waxaad ku leedahay talaabooyinka uu raacay.
FIIRO GAAR AH: Laga soo cusbooneysiiyay Windows XP iyo mobiil bilaash ah oo laga keenay Faransiiska (Ma aqaano haddii kan dambe uu saameyn ku yeelan doono, ka dibna waan cusbooneysiiyey maxaa yeelay cusbooneysiintu mar hore ayey timid Faransiiska ...)
0. Keydso waxaad xiiseyneyso (xusuusta gudaha ayaa qaabeyn doonta, lumineysa barnaamijyada, iwm). Haddii xiriirada, iwm, aad iyaga u waafajinta xisaabta Google, ka dibna wax dhibaato ah ma. Waxaan kugula talinayaa inaad sameyso liiska barnaamijyada aad rakibtay.
1. Soo dejiso oo rakib New Studio Studio 1.3 oo ka socda websaydhka Samsung Mobile Spain. Waxaan akhriyay in lagugula talinayo inaad ka tirtirto noocyada kale iyo darawalada haddii aad horey u haysatid (kiiskeyga ma aheyn).
2. Ku dheji mobilka qaabka khaladka USB si ay u aqoonsato aaladda: Dejinta -Qalabyada-Horumarinta -Balbixinta USB.
3. Bilow PC Studio oo ku xir mobilka.
4. Ka dib markaad aqoonsato mobilka, dhagsii "Cusbooneysiinta" (laga yaabee inaan kula soo socodsiin doono wax yar ka dib markii aan isku xirayo inay jiraan wax cusbooneysiin ah oo la heli karo).
5. Waxaan tagnaa tabka cusbooneysiinta qalabka. Waxaan doorannaa qalabkeenna, GT-i5700.
6. Hadda waxay hubin doontaa cusbooneysiinta. Marka la helo, waad aqbashaa.
7. Haddii aad heshay, markaa waad ku sii socon kartaa rakibidda. Raac nidaamka kadib dhowr tillaabo kadib (soo dejintu aad ayey gaabis u tahay: S), waxaa lagaa casriyeyn doonaa moobilkaaga 😀
Dhibaatooyinka aan la kulmay:
* Ku guuldareysiga rakibida cusbooneysiinta: Waxay igu dhacday aniga markii ugu horeysay, waxayna ii sheegtey inay isticmaali doonto soo kabashada maxaa yeelay malaha moobaylka ayaa qaldami lahaa. Muhiim ma ahayn, maadaama moobilku uu sii waday la shaqeynta qaybtii hore. Wixii aan sameeyay waxay ahayd dib udejin adag (dib u soo celin warshad) oo ka timid moobilka iyo cusbooneysiinta horeyba u shaqeysay
* Ma jiro xiriir shabakadeed oo ka jira NPS: Kani wuxuu ka muuqanayaa Studio cusub ee 'Studio' marka laga raadinayo cusbooneysiinta mobilka. Waxay soo baxday aniga oo dhowr jeer i baaraya, markii saddexaad.
* Shilkii MainNPS markii la bilaabay Studio-ga Cusub ee PC: Waan dib u rakibay, iyo voilà.
* Iima soo ogeysiineyso inuu jiro cusbooneysiin cusub: Inkastoo fariinta aysan muuqan, waxa muhiimka ah ayaa ah inay ka muuqato daaqadda cusbooneysiinta.
Qoraallada kama dambaysta ah:
* Nooca lagu rakibay sida ku xusan "About": 2.1-cusbooneysiin1 (Nooca la cusbooneysiiyay ama gaarka ah ee Samsung?)
* Ku raaxeysi badan. Muxuu kaga duwan yahay 1.5! 😉
Salaan kadib, oo fiiri inaad heshay 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Spica ilaa Android 2.1
184 faallooyin, ka tag taada
Hagaag, waxay noqon doontaa in laguu cusboonaysiiyay inaad daacad u tahay inaad xor tahay, maxaa yeelay aniga ahaan, aniga oo leh yoigo spica, ma heli karo wax cusbooneysiin ah. "Mobilkaaga waa la casriyeeyay", oo leh 1.5.
Runtii waxaan rabay inaan dhadhamiyo 2.1, waxaan u maleynayaa inaan u socdo cyanogen, waan ku daalay sugitaan 😉
Wanaagsan, waxaan ku rakibay HTC Diamond oo si cajiib leh ayey u socotaa, dabcan xaddidan, laakiin waad arki kartaa kartida barnaamijkan. Suaal..? Sababtoo ah ma muujinayaan hawlgalka GPS, ugu dhakhsaha badan waan iibsan doonaa midkoodna oo ma jiro blog aan ku arko hawlgalka GPS, kaliya YouTube-ka waxaa laga helaa ilaa 2 fiidyow laakiin aan dheeri ahayn…. Muhiim maahan ama aniga kaliya, miyaan xiiseeyaa shaqadaas ...?
Ku jawaab jomimube
Halkan Isbaanishka wali ma soo bixin, taasi waa sababta oo ah waxay laheyd moobil Faransiis ah, in ay jirto cusbooneysiin ah 2.1. Halkan waxaan ku sii wadaynaa sugitaanka Maajo si aan u aragno haddii ay soo baxday, iyo in kuwa Orange aysan wax dhibaato ah ku qabin cusbooneysiinta taasi waxay noqon doontaa hees kale.
Ku jawaab Chuy
Iyo inay cusbooneysiiyaan Galaxy Spica sidoo kale waxaa ku jira boosteejooyinka Galaxy? Mise sidii had iyo jeer ayaan uga tagnay? Sababtoo ah nin ... maxaa dhar ah oo ay nagu sameynayaan annaga isticmaaleyaasha Galaxy i7500 ...
Istuudiyaha kumbuyuutarka xitaa ma aqoonsana moobilkeyga ... Waxay ii sheegaysaa in qalabka aan si sax ah loo aqoonsan karin. Waxaan hayaa wadayaashii ay ku rakibeen isla Studio-ga PC-ga ah websaydhka Samsung. Waxaan leeyahay araga. Xitaa ma akhriso kaarka xusuusta. Wixii talo ah?
Ku jawaab Carillan
Aniga aniga ayaa ii sheegaya waxay ii sheegaysaa cilad isku xir ah hadii kale ma jiro qaab lagu cusbooneysiiyo aakhirka waan sii wadaynaa sugitaanka waana inaan helaa taas XNUMXda Maajo
Ku jawaab Orlandoso
Noo soo sheeg marka ay suurta gal tahay fadlan!
Aniga ahaan waa been abuur mobayl ah ... waxaan la joogay wax ka yar 1 todobaad waxayna iga dhigeysaa inaan doonayo inaan ku celiyo midabka liinta ... Waxaan dareemayaa guuldaro bluetooh Waxaan horeyba uga aqriyay boggaga qaar inay tahay android Dhibaato, ma haysto ikhtiyaarro aan ugu diri karo feylasha adoo adeegsanaya bluetohh ... Ma arko marka farriimaha ay imaanayaan maaddaama aysan ii oggoleynin inaan beddelo laxanka kaliya kuwa sida caadiga ah ku yimaada terminaalka, batteriga wuu socdaa 1 maalin iyo in aan haysto waxyaalaha intiisa badan sidaa darteed anigu ma cuno wax badan ... si kastaba ha noqotee ... ninkaygu wuxuu leeyahay diyaaradda adiguna hawlo badan ayaad haysataa oo wax dhib ah ma siinin ... xitaa batteriga Waxaan sugayaa cusbooneysiinta samsung ilaa android 2.1 ... waxaan rajaynayaa inay sifiican u socoto hadaanay ahayn Maxay tahay khiyaanada terminal ee samsung salaan!
Ku jawaab silvita
Sidoo kale waxaan haystaa terminaalka laga keeno Faransiiska cusboonaysiintuna way muuqataa, laakiin ma cusbooneysiin karo maxaa yeelay tallaabada soo degsashada waxay u muuqataa mar walba: «Qalad ku saabsan wada xiriirka serverka. Soo dejintu way joogsatay. " oo si kasta oo aan u siiyo si aan markale isugu dayo, ma xidhi karto (Waxaan tijaabinayay 3 daqiiqo kasta ama wax ka badan 5 saacadood mana jirto si aan u soo dejisan karo).
Waan kuu sheegayaa haddii aan cusbooneysiin karo. Salaan.
Ku jawaab Suky
horey u rakibo istuudiyaha pc. 1.3 laakiin ma qaato taleefankayga gacanta oo waxaan si daacad ah u tijaabiyaa kumanaan waddo mana aqaano sida loo sameeyo ... Waxaan hayaa mar kale cusub, waxaan iibsaday wax ka yar bil ka hor aad ayaan u xiiseeyaa .. way fiicnaan laheyd hadaad ilasoo xiriiri karto ... aad ayaad umahadsantahay
Jawaab ku bixi Matias
halkan sharaxaad wanaagsan
Ku jawaab datagrid
Aakhirkii waan helay, waxaan eegay bogga Samsung Mobile ee Faransiiska waxaanan arkay nooc PCStudio ah oo ahaa 1.4 halkii 1.3 laga heli lahaa Isbaanishka (My terminal waa bilaash oo laga keenaa Faransiiska, Isbaanishkana waxaan u malaynayaa ma shaqeyn lahayd).
Cusbooneysiinta PCStudio 1.4 waxaa la sameeyay markii ugu horeysay iyada oo aan wax dhibaato ah ama isku xir la'aan ah.
Maaddaama uu taleefanka ku beddelayo nooca 2,1, waxaan jeclahay nooca cusub in kasta oo ay weli waxyaabo badan ii dhiman yihiin.
Iyada oo leh nooca 2.4 bluetooh horeyba adiga ayuu kuu shaqeeyaa?
waad sudhan tahay paba xD
Ku jawaab geek
Waxaan haystaa mobilada Yoigo wax walbana waan isku dayey, waxaan soo dejiyey nooca New PC Studios French, oo ah 1.5. Xitaa sidaas oo ay tahay, ma jirto jid ... maxaa yeelay taleefankayga waa Isbaanish? Fikrado kasta? Waxay ii sheegaysaa inaysan jirin wax cusbooneysiin ah oo loo heli karo xaruntayda ... laakiin way i ogaataa wax walbana way fiican yihiin!
Maxaa sudhan x me ??? xk haday haa tahay, waa sidee qaabka loo ixtiraamo dadka… maya ???
Waxaan ahay berde dijo
Waxaan ku hayaa mobaylkan Yoigo qiyaastii 2 ama 3 toddobaad, anigoo isku dayaya inaan maalin walba u cusboonaysiiyo habka caadiga ah, mana jirto dariiqa loo maro. Waxaan isticmaalaa PcStudio 1.3, moobilkuna wuu gartaa laakiin ma heli karo cusbooneysiin.
Ugu dambeynti waxaan rakibay android 2.1 anigoo adeegsanaya Odin (waxaa jira casharo dhowr ah oo internetka ah) inkasta oo markii hore aanan ku dhiiran oo aan doonayay inaan sugo, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan sameeyay. Moobaylku aad buu uga fiican yahay dhan walba, waa wax lala yaabo.
Ogeysiis: kaliya rakibay 2.1 ayaa i siisay aragti ah in miisaska miisaska uu dib u dhac yar ku yimid, taas oo aan aniga igu dhicin 1.5, taas oo ka sii daraysa rakibidda Launcher Pro Beta, suuqa, aad ayey uga sii fiicantahay weli, waa aniga ku talin 100%.
Marka laga hadlayo Bluetooth, sidoo kale waxaan dhibaato ku qabay in aan la wadaago faylasha aalado kale, ka dib markii aan baaritaan ku sameeyay arinta, waxaan ogaaday in si waadax ah sidan loo sameeyay, ma ahan wax cilad ah, waxaad u isticmaali kartaa oo keliya Bluetooth-ga maqalka (tusaale: baabuurta gacmaha oo aan lahayn ). Si kastaba ha noqotee, oo halkan ayaa timid waxa xiisaha leh, waxaa jira barnaamijyo ka socda Suuqa, kuwaas oo awood u siinaya hawlgalka BlueTooth wareejinta faylasha, haa, waa inaad haysataa android 2.0 ama 2.1 ugu yaraan.
Dhamaan waad salaamantihiin 🙂
Ku jawaab yo higuero
Kani waa iimaylkii aan ka helay Samsung markii aan weydiinayay cusboonaysiinta 'android 2.1':
Subax wanaagsan Macaan,
Waxaan kugula socodsiineynaa Spain, majiro wax rasmi ah oo cusbooneysiin ah laga bilaabo 1.5 ilaa 2.1 ee xaruntan.
Waqtigaan ma jiraan wax macluumaad ah, oo ku saabsan ereyga, si ay kuu awoodaan inay ku siiyaan.
Helaa salaan diiran
Naadiga Ciyaaraha Samsung
Haddaan ogaan lahaa, ma iibsan lahaa taleefanka!
Ku jawaab Dulce
Dalka Kolombiya shirkad yar ayaa ka siisay «Promocion» Samsun Galaxy Spica oo leh nooca 1.5 mana jirin qaab lagu rakibo nooca cusub. Waxaan ka helay casharkaan iyo voila, waa la cusbooneysiiyay dhib la'aan. Kaliya ka dhig cusbooneysiinta, ha ku dabaqin casharka intiisa kale. Qoraaga casharka wuxuu cadeynayaa in loogu talagalay Samsung oo leh firmware i5700L ama GL-i5700L. Kahor cusbooneysiinta, waa fikrad wanaagsan in la qoro dhammaan xogta APN.
Nasiib wacan waxaan sugeynaa 2.2
Waxaan ubaahanahay inaad ii soo dirto istuudiyaha pc 1.3 ama 1.4 iimaylkeyga fadlan, waa halkaan Argentina waa meesha ugufiican ee khiyaanadan noocan oo kale ah, marka waxaan ka shakisanahay maadaama aysan taleefoonka gacanta ku xusneyn, maahan ku habboon garcas-yadaas inay maal-gashadaan cusbooneysiinta isticmaaleyaasha spica, emailkeygu waa jdhdanes@gmail.com, hotmail-ka waa isla isticmaale id jdhdanes, oo yahoo waa punkrock970@yahoo.com.ar Dhamaantiin waad mahadsan tihiin, mudanayaal, adeegsadayaasha golahan.
cusboonaysiinta Odin, waa habka kaliya ee xilligan. Intaa waxaa sii dheer, waa mudan tahay in la cusbooneysiiyo oo, sida Higuero ay tiri, rakib biraha!
Ku jawaab alexfigueres
Waan ka helay bandhigga, qaasatan inay tahay bandhig android ah oo leh astaanta taleefanka windows ee gadaasha .. hehehe
Ku jawaab Dozz
Waad salaaman tahay, qof ma ii sheegi karaa sida loo hagaajiyo taleefanka si codsiyada si toos ah loogu keydiyo sd marka aad ka soo degsaneyso suuqa oo aad rakibayso?
Waxay u muuqataa in ugu dhakhsaha badan ay u oggolaan doonaan cusbooneysiinta 2.1 Spain. Waxaan u qoray iyaga oo xiiseynaya cusbooneysiinta Spica 2.1 tanina waxay ahayd jawaabtoodii:
Galab wanaagsan XXX:
Waad iska hubin kartaa dhowr maalmood gudahood si aad u cusbooneysiiso, waa inaad gasho http://www.samsungmobile.es Qeybta taageerada> cusbooneysiinta firmware> raac talaabooyinka lagu cusbooneysiinayo.
Ku jawaab Suspense
Dhamaan waad salaaman tihiin (Anigu waxaan ahay isticmaale Android ah shan iyo toban maalmood sidaa darteedna ku cusub boggan)
Waxaan warqad u qoray Samgung waxayna xaqiijinayaan inay horey u heystaan ​​cusbooneysiinta la heli karo:
Waxaan idinla socodsiinayaa in cusbooneysiinta shabakada mar hore la heli karo.
ma leedahay spica? Ma ka soo degsatay cusbooneysiinta bogga Spain?
Qof noo xaqiiji fadlan !!!!
Aniga ahaan NPS, oo leh 1.5, waxay ii sheegaysaa inaysan jirin nooc ka sareeya. Weli waan sugeynaa, waxna lagama helin 2.1 wali 🙁
Sida muuqata waxa aan ka arko jiidaya google, iyagu cusbooneysiinta ayay saareen oo waxay u shaqaysaa kaliya taleefannada bilaashka ah. Kuweena aan taleefanka kula leenahay Yoigo, Liinta ... waxba ma jiraan. Iyo Samsung, waxay si dheer u yiraahdaan waxaa jira dhacdooyin la xiriira terminalka qaar. Oo ka yimid Yoigo waxay yiraahdaan iyagu gacantooda kuma galaan barnaamijka ... laakiin sida muuqata, haddii aad haysato terminaal la kabo, ugu yaraan hadda ma jiro wax cusbooneysiin ah 2.1
Ku jawaab Viktor
Ceeb ayey noqon doontaa haddii ay nagaga tagaan inaan ku xannibno 1.5, dabcan.
Waxaan hayaa taleefan Yoigo ah oo la soo raray, fiiri haddii aan cadaadis saarnay ama wax ...
Ma jiraa qof isku dayay dib u dejinta taleefanka? Marka si ay ugu laabanto goobihii warshadda oo aysan aheyn Orange / Yoigo / iwm?
Ma doonayo inaan isku dayo dib u dejinta oo aan cusbooneysiiyo, sababtoo ah taas waxaan luminayaa damaanada ... taasna, waxaan halis ugu jiraa inaan iftiimiyo. Waxaan rabaa nooca 2.1 oo aanan waayiin damaanada ... Samsungna waa inay siisaa oo aysan kubadaha dibada u tuurin.
Runtu waxay tahay inaan qoray aniga oo aan tijaabin. Waxaan si fudud u aaminsanahay nooca Samsung oo waxaan u arkaa mid xiiso leh inaan ka faalloodo.
Dabcan, haddii aad dhahdo kuma shaqeynayso mobilada gacanta lagu kabay ee Yoigo, ma doonayo inaan isku dayo, ugu yaraan ilaa aan si fiican u barto Android OS-ga.
Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa samsungs inay ka jawaabaan su'aalahaaga taageerada tiknoolajiyada qosolka leh?
Ku jawaab Hulkom
Ku xir Spicas-kaaga kombuyuutarka in cusbooneysiinta rasmiga ah ay durba timid, ugu yaraan Yoigo. _ ^
Ku jawaab paqkr
Xaq, paqkr !!!!
2.1 on Spica aan la Yoigo, ka shaqeeya 🙂
Waxaa laygu qabtay talaabada 3-aad ee cusbooneysiinta, waqti dheer ayey kugu qaadatay?
Ku jawaab gonzaloadrio
Waxaan u maleynayaa inaan isku dayi doono xp maxaa yeelay araga waa lay qabtay
Hagaag ugu dambayntii waxaan horeyba uheystay nooca 2.1 waxaan kugula talinayaa inaad cusbooneysiinta ku sameyso win xp maxaa yeelay aragtidayda waxay i siisay dhibaatooyin, kaalay, iva ma ahan xp sikastaba wax dhib ah kalama kulmin, marka waxaan kugu dhiiri galinayaa inaad sameyso , runtii waa u qalantaa xanuunka
waad salaamantihiin dhamaan dadka haya spica iyo dhamaan kuwa androidsis
Sidee buu kuu shaqeeyaa? Dhowr jeer ayaan hayaa, laakiin inaan ka saaro batteriga. 1.5-kii igama dhicin aniga. Dabcan, waxay leedahay horumarin la taaban karo
paqkr: Waxay si buuxda iigu shaqaysaa aniga, shil la'aan. Waxay ku socotaa dheecaan aad u badan, aad u dhakhso badan, waxay umuuqataa mid mobiil kale ah.
Hagaag, haddii maanta aan galabtii oo dhan ku qaatay bakoorad siinta waxna ama wax yar oo fashilaad ahi igu hagaagsan yihiin sida J leeyahay, waxay umuuqataa in mobiil kale uu dheecaankiisu aad u badan yahay sidaa darteed hadda waxaan kula talinayaa qof walba maadaama uu yahay mobiil aad u jaban oo la socda Posibilades aad u weyn sidoo kale yoigo runtii qiimahoodu hooseeyo
Markii ugu horeysay waxay i siisay qalad markii aan cusbooneysiinayay ka dibna si fiican ayey u cusbooneysiisay. Laakiin mararka qaarkood wax iga gaabiya ayaa igu laalaada. Tusaale ahaan, dilaaga hawsha mararka qaar teleefankayga ayuu xidhaa 1.5kiina waan fiicanahay. Dhinaca kale, kiiboodhka ku jira 2.1 ayaa ka fiican
Ku jawaab Nomore
Marka laga reebo gaabis gaar ah oo leh LauncherPro way ka fiicantahay sidii hore oo kumbuyuutarka ayaa fadeexo ah.
in ay jiraan shaqsiyaad gacan ku dhiigleyaal ah oo xidha hawsha uurka (samsung custom menu) markaa waxay la mid tahay sida loo xiro sahamiyaha daaqadaha, taleefankana waa inuu dib u bilaabaa markaa waxay umuuqataa inuu sudhan yahay
Haa Haa. Waxaan horeyba u xalliyay adoo gelinaya liistada hawsha si aan iskaga indhatiro astaamaha taas.
Sikastaba, waad ku mahadsantahay jawaabtaada.
Iyada oo leh spica cusub aniga macquul iima aha inaan cusbooneysiiyo. W7 aaladda aniga ima aqoonsaneyso, XPna NPS 1.3 iyo 1.4 labadaba laga soo dejiyey webka wey garanayaan laakiin waxay ii sheegeen inuusan ku habooneyn barnaamijka. Fikrado kasta?
Waxay umuuqataa in layga daayay anigoo sudhan talaabada sadexaad, intee in le'eg ayuu cusbooneysiintu kugu qaadan doonaa Mahadsanid
Ku jawaab ali
Waad salaaman tahay, isla waxbaa igu dhacay, seddex maalmood oo hareeraheeda ah, iyo dhamaadkaba si nasiib ah ...
Hagaag, waxaan ku sameeyay taleefan laga sii daayay liinta, iyo sidaas darteed windows media player with sp3.
Hadda waxaa imanaya pijada: ha ilaawin inaad ku xirto USB-ga
ISKU DARKA-TELEFOONKA XAALADAHA-DHEERAAD AH EE DHEXDHEXAAD AH, IYO NADIIFINTA XULASHADA ISTICMAALKA USB KALIYA AS MASS STORAGE, laga bilaabo halkaas isku dayga koowaad
Nasiib (in kastoo aan u maleynayo inaadan u baahnayn)
Waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyay adiga iyo qofkasta oo ku dhaca si isku mid ah.
Ku jawaab selu
Cusboonaysiinta waxay qaadataa ilbiriqsiyo
Ilaa iyo inta aad cusbooneysiinta ku sameyneyso xp, waxaa ugu wanaagsan inaad ku sameyso mid nadiif ah oo aad ku rakibeysid nps-ka iyo darawallada ka socda cd-ga ay ku siinayaan mobilka, ha ilaawin inaad moobaylka ku dhigto qaab khalad ah, si aniga W7 iyo W vista ayaa i siisay guuldarooyin
Spica-keena weligiis ma loo casriyeyn doonaa 2.2?
Fikrad kasta oo leh dhibaatada iswaafajinta ...? : S
Iyada oo aan waafaqsanayn waxaad ula jeeddaa in aysan kuu oggolaanaynin inaad waxyaabo qaarkood sameyso? ama in aysan kuu oggolaanaynin inaad wax sameyso maxaa yeelay waa run in shaqooyinka qaarkood ay la jaan qaadayaan oo keliya terminaallada qaarkood maxaa yeelay barnaamijkaas ayaa loogu talagalay dhammaan Samsung-yada, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad sameyso wixii aan horay u dhigay.
Waxaan helay usbuucii ugu dambeeyay ee de yoigo waxayna horeyba ii sheegaysaa in nooca uu yahay 2.1-update1 taas oo macnaheedu yahay inaan horeyba u rakibay ????? !!
Ku jawaab putxi
Mid kale oo leh Orange Galaxy, oo aan awoodin inuu cusbooneysiiyo ...
Aynu eegno haddii ay shaqo galaan oo ay dibadda u soo saaraan.
Ama haddii qof uu haysto casharro uu ugu sameeyo Oranji inuu sidaas ku yiraahdo
Ku jawaab batserra
Waxaan sidoo kale haystaa Liinta oo waxay ii sheegtaa inaysan la jaanqaadi karin, sidoo kale ogeysiiska cusbooneysiintu uma muuqdo, waxaan u maleynayaa inaan sugi doonno. Fagaarayaasha kale waxaan ku aqriyay ilaa iyo bisha Sebtember waxba, waxaan rajeynayaa inaysan sidaas aheyn oo aan heysano xagaaga!
Ku jawaab zag.
fadlan xaqiiji in dadka yoigo haddii aad cusbooneysiin karto taleefanka maxaa yeelay waxaan ka socdaa xp:
+ nps 1.3 1.4 wuu garanayaa cusbooneysiinta laakiin wuu istaagayaa waana inaad batteriga ka saartaa soo kabsashadiisa iyo kadib markaad ku celceliso dhowr jeer waxba.
+ kie ma aqoonsana taleefankayga.
Waxaan la duulayaa yoigo iyo samsung wax fikrad ah (ma doonayo inaan wali xidid u yeesho)
Ku jawaab oldlastman
oldlastman waxaan ka imid yoigo waxaanan idiin xaqiijinayaa in hadii la cusbooneysiin karo, sida iska cad khaladku kama iman doono yoigo xaalad kastoo ka timaada samsung aniga wax lamid ah ayaa kugu dhacay
Haddii aan si sax ah u xasuusto mid ka mid ah isku dayga, NPS waxay ii sheegeen inay tahay inaan ka soo kabto iyo sida aan ula yaabay in si lama filaan ah aan horeyba u haystay 2.1
Taladaydu waxay tahay inaad ku tijaabiso kombuyuutar aan wax shaqo ah ku lahayn oo aan waligood ku xidhnayn oo ku wada sameeyo wax kasta oo laga soo bilaabo xoqida iyo cd ay ku siiyeen, ama haddii kale ku tijaabiso kombuyuutar ay hore ugu cusbooneysiisay .
habka aan kugula taliyo qof walba inaad rakibatid launcher pro beta, runtu aad ayey ugafiican tahay muuqaalka samsung, runtii aad baan ulayaabay.
Waa salaaman tahay waxaan rabaa in aan cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Spica-ga laakiin cusbooneysiintu wali ma aysan gaarin Argentina, way ogyihiin haddii aan ku cusbooneysiin karo bogga Samsung Spain iyo sidee ayaan u cusbooneysiin karaa, fadlan, qof I caawin kara maaddaama Android 1.5 yahay xun, wax wanaag ah kama tareyso waxaan rajeynayaa jawaabahaaga
Jawaab juulio 17
Isku day badan ka dib oo aan waxba helin, khaladaad ku dhacay dhamaan qaybaha hawsha, waxaan ku rakibay nooca 1.4 ee PC Studio kombuyuutar laptop ah oo wata Vista (W7 kuma sii deyneyso) waana marka ay ii ogolaato inaan cusbooneysiiyo markii ugu horeysay.
Waxyaabo dhowr ah oo maskaxda lagu hayo:
-Bateriga 100% ama ku dhowaad.
-Barnaamijka sida nadiifka ah loogu rakibay sida ugu macquulsan. Haddii aad aragto inay nuugayso, dib u rakibid, magac beddelid ama tirtirto ka hor galka Samsung ee «Barnaamijka Archives».
-Taleefanka qaab khalad ah. Hagaag, barahan ayaa horay usheegay.
Waxaan ka imid Argentina mana ii oggolaan doonto inaan cusbooneysiiyo…. ma ogi hadaad halkan awoodid ???? Mahadsanid. Waxaan hayaa spica galaxy
Dadyahow waad salaaman tihiin, waxaan hayaa su'aasha soo socota, waxaan hayaa Samsung Galaxy i7500, runtiina waa isku mid muuqaal ahaan, laakiin qaabku wuu ka duwan yahay 5700 .. su'aashaydu waxay tahay, ma ku cusbooneysiin kartaa jilicsanaanta 2.1 casharkaan? yua in meel kasta oo ay ka hadlaan 5700 kii oo aan ahayn tusaalaha aan haysto, halkaas ayaan ku kala furfuray cusbooneysiinta .. talaabooyinku waa isku mid ??? Wax kale, cusbooneysii qalabka qalabka '1.6', waxaan haystay 1.5, oo hadda waxaan ku hayaa wax walba oo Ingiriis ah, ma u wareegi karaa Isbaanish? Haddii aan cusbooneysiiyo, waxay ku socotaa Isbaanish ???
Waad salaaman tihiin waxaan qabaa samsung galaxi spica mana heli karo waxyaalaha ii fududeynaya hadii qof i caawin karo emailkeygu waa jpserpa@hotmail.com aad baad u mahadsantahay corty
Ku jawaab Corty
kapo waxay ii sheegaysaa in qalabku aanu la jaan qaadi karin oo aanu taageerin cusbooneysiinta softiweerka !!!! Ma iigu jawaabi kartaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah? Mahadsanid!!
Ku jawaab gaby
Waan isku xiraa iyo wax walbo laakiin iima ogola inay wax sameyso maxaa yeelay waxay dhaheysaa moobilku iima ogola in aan isbedelo isla markaana isla sababtaa ma ogola in aan cusbooneysiiyo, waan jeclaan lahaa macluumaadka aan ka imid Guatemala
Waad salaaman tahay… sidee tahay !!! waxaan kuu sheegayaa inaan cusbooneysiin karo… .laakiin isla markii aan dhameysto soo dejintooda, telefoonki dib ayuu u bilaabmay erayga samsung ma joojinayo biligleynta mana bilaabmayo…. Maxaan sameeyaa? ???? mahadsanid
Ku jawaab emanuel
Hagaag, waxaan sameynayaa howsha si aan u cusbooneysiiyo Samsun Galaxy Spica oo markii ay soo dejineyso cusbooneysiinta waxay dhaheysaa: KHALAD LA XIRIIRKA ADEEGGA. DOWNLOAD AYAA JOOJTAY
Ku jawaab Eduardo
Waad salaaman tihiin dhamaantiin !! Maanta waxaan helay galax spica oo sifiican ayaan u arkaayay faallooyin qaarna waxaan arkayay in shirkadaha kale ee aan oranjku horeba u haysan, anigu waxaan ka imid liinta waxaanan jeclaan lahaa inaan arko haddii taariikhda cusbooneysiintu soo bixi doonto ay tahay mid horeba badbaadiyey, sababtoo ah Waa run in nooca 2.1 uu u qalmo. Mahadsanid!
Hubert Carrera dijo
Waxaan sameeyaa nidaamka oo dhan, laakiin waxay ii sheegtaa inaanay jirin wax cusbooneysiin ah oo taleefankayga ah… i caawi….
Ku jawaab Huberto Carrera
Huberto ma noqon doonto inaad adiguna ka timid Orange oo cusbooneysiinta Orange lama heli karo, laakiin haddii NPS-kaaga uusan kuu sheegin inay jiraan wax cusbooneysiin ah oo ku saabsan taleefankaaga, ma garanayo sida aad u raadin karto iyaga maxaa yeelay waxaan si toos ah uga boodaa ogeysiin.
By the way, fariintii hore ee aan kuusoo qoray, waxaan dhib ku qabay rakibida cusbooneysiinta maxaa yeelay waxba ma xasiliyo qof walba oo horey loo xaliyay horeyna waan u cusbooneysiiyay Android-kayga waa mid aad u wanaagsan laakiin hey waan cusbooneysiiyay badanaa sababtoo ah bluethoot-ka wax walba lahaa daboolay marka laga reebo iskuxirka leh baqbaqaaqda gaariga, iima oggolaan inaan helo ama aan wax u diro mobilada kale ama kombuyuutarrada laakiin waa la xaliyay.
Haye, waxaan ka imid Oranji waxaanan isku dayey 15 maalmood ka hor waxna majiro, qofna ma oga ama goorta la cusbooneysiinayo Oranka?
Xusuusin: fadlan markaad faallo bixinayso, sheeg shirkadda aad ka tirsan tahay, ama haddii aad xor tahay si aanad dadka u wareerin. WAA IN AAN WAQTIGA LAGU cusbooneysiin karin. SAMSUNG SPAIN AYAA LEEYAHAY WAKHTIGAN KELIYA WAKHTIGA LACAG LA'AAN. GO TIMO.
Ku jawaab juanmi
Yoigger sidoo kale adoo adeegsanaya nooca 1.5 ee istuudiyaha pc-ga cusub ee W7 iyo Samsung I5700
Maxaa igu dhaca aniga ayaa ah in barnaamijka cusbooneysiinta uu si caadi ah u socdo illaa uu ka gaaro tallaabada 3 (cusbooneysiin) halkaasoo taleefanka dib loo bilaabayo, isagoo ereyga samsung uga tagaya shaashadda si aan xad lahayn. Intaa ka dib waa inaan ka saaro batteriga si uu mar kale u shaqeeyo
wax fikrad ah?
Ka jawaab bolus
Fadlan ku qor shirkadda ka shaqeysa iyo haddii boosteejadaadu ay lacag la’aan tahay iyo in kale.
waa bilaash, waxaa lagu iibsaday miami .... waa samsung i 7500 .... waxaana u isticmaalaa shaqsi ahaan Argentina ... Waxaan u cusbooneysiiyaa 1.6 donut laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan dhigo 2.1 .. maxaa yeelay marwalba waxay igu tuuraan khaladaad .... mahadsanidiin kahor
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Spica oo leh Orange tan iyo bishii Abriil. Waxaan nahay Sebtember 30 waxbana kama aqaano cusbooneysiinta farxadda leh ee 2.1
Xitaa kuma dhibin weydiinta goorta uu baxayo. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay suurtagal tahay in lagu cusbooneysiiyo taleefankan gacanta (Odin) xitaa haddii aysan lacag la'aan ahayn.
Haddii qofna yaqaanno wax kale oo Oran ah fadlan CAAWIMO
Orange ayaa xaqiijiyay isbuucaan cusbooneysiinta Hero ee 2.1, bishii Agoostona waxay yiraahdeen waxay ka shaqeynayeen Galaxy Spica (iyada oo loo marayo twitter) waxayna ahayd inay dhowaan noqon doonto .. marka waa inaan sugnaa, waxaan rajeynayaa inaysan ka gudub Oktoobar, haddii ay horeyba ula heleen HTC iyo Boston, waa inaan ku kalsoonahay in Google heshiis la gaari doono Samsung .. waa inaan cadaadis dheeri ah saareynaa!
Waxaan rajeyneynaa sidaas, iyo kahor Oktoobar liinta ayaa leh cusbooneysiinta spica
Waxaan sugi doonaa xoogaa toddobaadyo ah maxaa yeelay sidoo kale waxaan xog ku hayaa taleefanka. Ma dareemayo inaan badbaadiyo ama lumiyo, iyo sababta oo ah imminka ima timaado imminka 1 bilood. Haddii uusan jirin taariikh go'an oo bisha Nofeembar ah, ha u faafiyo oo ha tuuro.
Dabcan, xilligan dhammaadka muddadiisa waa durbaba dhibic wanaagsan oo liin dhanaan ah.
Ku jawaab Yery
Waxaan haystaa samsumg galaxy, horey ayaan u cusbooneysiiyay laakiin hada 3G navigation ma shaqeynayo aniga, sidee baan u dhaqaajiyaa, fadlan qof ha ii sheego sida loo sameeyo, iimayl iigu soo dir jawaabta, waan ku mahadin doonaa
Ku jawaab rodrigo
Waxaan ka cusbooneysiiyay odin iyo wax dhib ah, oo ku saabsan 3 GI oo la yiraahdo oranji in uusan ii shaqeyn oo ay ii sharraxeen sida gacanta loo sameeyo iyo wax dhibaato ah, si sax ah ayey iigu shaqeysaa aniga, wac oo ha laguu habeeyo, iyo waad ii sheegi doontaa!
«Waan ka cusboonaysiiyay odin dhibna ma leh»
Sharax shuruudaha aad kula cusbooneysiisay Odin fadlan. Moobaylku ma lacag la’aanbaa mise maaha? Haddii kale, suurta gal ma tahay in la cusbooneysiiyo iyadoo aan loo eegin shirkadda (Orange, Yoigo, Vodafone ...)?
Haa, gebi ahaanba waa suurtagal iyadoo aan loo eegin shirkadda ama haddii ay lacag la’aan tahay.
Sababta uusan 3G kuugu shaqeynaynin waa sababta oo ah Odin waxaad qabanayso waa dib udajinta mobilada, waxayna sidoo kale tirtirtaa APN-yada horay loo dhigay. Kaliya waa inaad gacanta ku dhigtaa midka hawl wadeenkaaga (waxaad kuheli doontaa xoogaa xoogaa xoqid ah) waxaadna arki doontaa in wax waliba si hagaagsan u jiidayaan.
Waxaan hayaa spica liin dhanaan ah, kaarka liinta ayaan bilaash aheyn oo 3g ayaa baxay oo waxaan wacay oranji wayna ii xaliyeen, ka waran hadaan ku arko fagaarayaasha inay tahay inay ahaato 100% baytariga marka aan ku sameynayo it odin .. Laakiin waqtigan dhib malahan !!
dad wanaagsan. Waxaan leeyahay galaxi 1.5. Ma la ogyahay in la cusbooneysiiyo 2.0 ama 2.1 gudaha Argentina?, Shirkadda Movistar. yaa haya macluumaad, wadaag, mar horeba aad ayaad u mahadsan tahay. fupuat@hotmail.com isku mid ah @gmail
Ku jawaab fupuat
Shaki baa iga jira, ma isiin kartaa linkiga soo degsashada si aan u cusbooneysiiyo Samsung Galaxy tan iyo markii aan diido maqaalkaaga laakiin uma muuqdo, horay ayaan kuugu mahadcelinayaa, salaan
Ku jawaab marvin
Doono .. dijo
Waxaan ku siinayaa gacan, waxaa jira xiriiriye si loo soo dejiyo istudiyaha cusub ee pc http://www.samsung.com/es/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL
Kujawaab dardaaran ..
Waad salaaman tihiin, in mudo ah ayaan ka warqabayay qoraalkan, waxaan ka imid oranji waxaanan leeyahay dhibaato la mid ah tan kor ku xusan, wali ma ogola in la cusbooneysiiyo. Miyuu qof wacay ama ogyahay taariikh cayiman oo ah goorta aan cusbooneysiin karno mobilada android 2.1? Mahadsanid !!
Ku jawaab lau
Waxaan sidoo kale qabaa spica 1.5, mana jirto waddo, nps waxay ii sheegaysaa inaysan u baahnayn cusbooneysiin: Haa
Waad salaaman tahay, su'aal baan qabaa, waa maxay talaabada ugu horeysa ee la raaco lana go'aansado halka aan aadayo?
Waxaan kugula talinayaa inaad dhex marto boggan:
Halkan waxaad ku haysataa barnaamijyo iyo cashar yar
Waxay curyaamiyeen cusbooneysiinta 8 bilood. Orange wuxuu eedeynayaa Samsung iyo taa caksigeeda.
Waad salaaman tihiin, tanina waa waxa ay maalmo ka hor iiga sheegeen shabakada Samsung:
Gacaliye D. Diego:
Waxaan ka jawaabeynaa su'aashaada aad naga heshay Xarunta Adeegga Macaamiisha
Macaamiil, marka loo eego terminal-ka SAMSUNG.
Waxaa macquul ah in cusbooneysiintu waxtar yeelan doonto waxyar, xusuuso inaad isku daydo
cusboonaysii terminal-ka ka hawlgala nidaamka Windows XP oo soo dejiso
Codsiga ka socda xiriiriye:
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad wax su'aalo ah ka qabato arrintaas, waanu kugu casuumay
si aad ula xiriirto khadkayaga 902 17 26 78, halkaas oo aan ku bixin karno
caawimaad dheeraad ah.
Waxaan ku qanacsanahay kalsoonida aad ku qabto sumadeena.
Haddii aad qabtid wax su'aalo dheeraad ah, waan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno.
Samsung Electronics Iberia, SA
Tel: 902 17 26 78
Waxay ii sheegeen isla wixii ay soo saareen toddobaadkan laakiin laga yaabee inaan la heli karin…. is khilaafsan maya? =? maxaa ceeb ah kuwa liinta
Ku jawaab bbb
Nooca 1.3 ma aqoonsana moobilkeyga
Ku jawaab xD
Ma jiraan wax laga ogyahay cusbooneysiinta ilaa 2.1 gudaha Orange spica? Suurtagal ma tahay?
Ku jawaab krw
hello keria si aad u ogaato haddii qof ogyahay halka aan ku cusbooneysiin karo galakeyga ilaa 2.1 Ma fahmin sida ay tahay inaan sameeyo haddii qof ogyahay waan ku mahadsan doonaa x fadlan waan waalanayaa mahadsanid dadka
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, maanta 11 12 2010 Waxaan ku guuleystey inaan cusbooneysiiyo galkayga spica laga bilaabo liinta ilaa 2.1 cusbooneysiinta iyada oo loo marayo Nps waxyar ayey igu qaadatay tan iyo markii ay ahayd inaan uga tago warshad ahaan, laakiin waxay sameysay isbeddel aad u xiiso badan, liiska ayaa is beddelay, kaameradda (hadda waxay heysataa ikhtiyaarro dheeri ah) iyo xawaaraha terminalka ayaa ka sarreeya.
Waxyaabaha kale ayaa ah in muusigga muusiggu leeyahay barbaraha.
Sikastaba, waxaan rajaynayaa in faaladani u adeegto digniin, waan ilaaway:
My pc wuxuu la socdaa daaqadaha 7 32 bits oo markaad soo degsato cusbooneysiinta waxay kuu sheegi doontaa in nps-ka aysan sii shaqeynaynin iyo inaad soo dejisanayso kies-ka.
Wanaagsan, waxaan sameeyay isla talaabooyinka aad qaaday oo kale oo ka socda daaqadaha 7 waxayna ii sheegaysaa inaysan jirin wax cusbooneysiin ah, waxaa lagama maarmaan ah in laga sameeyo daaqadaha XP sida ay yiraahdeen iyo in kale? Waan waalanayaa
Ku jawaab nuuriya
Subax wanaagsan saaxiib, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad i caawin karto. Waxaan u iibsaday Spica xaaskeyga waxaanan jeclaan lahaa inaan siiyo cusbooneysiin 2.1, waxaan ka imid Venezuela, waad ku mahadsan tahay dareenkaaga.
Nasiib darrose adeegsade ka hooseeya ayaa faalladan bixiya:
Waxaan ka heystaa spica movistar Peru Samsung wuxuuna ii soo diray fariin isagoo leh cusbooneysiinta lama sii deyn doono Latin America ee terminalkan.
Marka waxaan ka baqayaa inaad ku fuliso cusbooneysiinta barnaamijka Odin
Waa kuwan bog ay kuu sharxayaan:
Xusuusnow inay tahay nidaam jilicsan oo ay tahay inaad si fiican u aqriso waxa ay tahay inaad sameyso si aad u saxdo.
Waxaan rajeynayaa inay waxtar laheyd waxaanan dareemayaa in wadankaaga iyo dhamaan Latin America aysan ku heysan cusbooneysiintaas, laakiin hadii wax waliba si hagaagsan u socdaan waxaad ku dhex ridi kartaa ROM ka fiican midka aan haysto.
Nasiib wacan saaxiib
doonaa .. dijo
Aniguba waxaan ka imid Venezuela, waxaa jira linkiga soo degsashada, rakib, wax walbana waa cusbooneysiinaysaa.Waxaan ka imid Caracas, Venezuela.wax kasta, weydii emailkeyga. wilmer.galaviz159@gmail.com http://www.samsung.com/es/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL
Kujawaab noqo ..
Saaxiib salaan! Waan isku dhownahay, waxaan ka imid teknikada. Ma maamushay inaad cusboonaysiiso samsung galaxy spica ilaa android 2.1? Jawaabtaada waan sugayaa; Hadana hadaad sameysay waxay noqoneysaa inaad wax yar i caawin karto, walaal, waxaan ku waalanayaa taleefankayga 1.5. Mahadsanid! Jawaabtaada waan sugayaa dhawaan.
Ku jawaab gabox90
haye waa wax aad u fudud odinimada ... waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ka heshaa bogga venezuela android ma lihi isku xirka laakiin google-ka waxaad ka heli doontaa, si fiican ayey iigu adeegtay super-ka casharkuna waa sahlan yahay waan ka baqay laakiin wax walba sifiican ayey kudhaceen !! guuldareysteen ... !!! dhowr jeer laakiin waxay ahayd inaanan ka warqabin qaabka khaladka ... kan shanaad wuxuu ahaa soo jiidashada waxaanan ku cusbooneysiiyay froyo 2.2 laakiin tan iigu fiican aniga waa v2.1 way fiicantahay haddii aad qorsheyneyso inaad isticmaasho froyo waxaan kugula talinayaa inaad sidan ku joog ....
Caawinaad, i caawi, waayo, waa maxay tillaabooyinka la raacayo? Ma cusbooneysiin karo oo waan waalanahay durba
Ku jawaab Yuliannit
Waad salaaman tahay, waxaan joogaa Kolombiya, waxaan rakibay PC Studio oo waxaan ku xirey Spica, laakiin markaan cusbooneysiiyo, waxay ii sheegtaa inay horey u leedahay noocii ugu dambeeyay, laakiin waa been maxaa yeelay faafaahinta faafaahinteeda waxay ku sii socotaa inay leedahay waa 1.5, ma jiraa qof og waxa ay noqon karto?
Aad baad u mahadsantahay!
Hawl wadeenadu ma cusbooneysiiyaan waxa ku jira moobilkan waana sababta loogu cusbooneysiinayo meelaha qaarkood haddii iyo kuwa kaleba, u sabir inay imaaneyso
Waad salaaman tihiin, sideen isku dayaa inaan cusbooneysiiyo Samsung-ka? Dhibaatadu waxay tahay in cusbooneysiintu ay bilaabatay wax ka badan saacad ka hor waxa dhacayana waxay tahay inay shaashadda saaran tahay in la cusbooneysiiyo kombiyuutarka iyo mobilka oo ay ku qoran tahay astaanta Samsung shaashadda. . Waxaan u maleynayaa inuusan waxba qabanayn laakiin waxaan ka baqayaa inaan taabto, haddii qof arko isagoo wax ii sheegaya. Mahadsanid
Shirkadaha taleefannada qaarkood waa inay la jaanqaadaan waxyaabaha ku jira noocyada cusub, si taleefannada qaarkood loo cusbooneysiiyo waqtiyo kala duwan
Waan ka xumahay, jawaabtu waxay ahayd tii hore, adiga adigu waa kan, isla waxbaa igu dhacay, waa inaad ku riddaa ka soo kabashada degdegga ah (riix badhanka mugga hoos + badhanka kamaradda + badhanka badhanka) oo mar kale isku day, Hadday weli tahay waxba ma sameeyo (aniga ayey igu dhacday) banaanka u soo saar batteriga oo mar kale u daar qaabka dib u soo kabashada, barnaamijku sidoo kale mar kale ayuu daaraa oo markale ayuu isku dayaa, wuxuu taabanayay niyadeyda dhowr saacadood laakiin ugu dambeyntii waxaan shaqayso, deji, wax jabaya ma jiraan
Caawinaad aad u fiican Jose, markii 1-aad ee aanan ku dhejin karin xaalada deg-degga ah, waan shitay, laakiin feejignaan baan qaatay oo waxaan soo saaray batariga oo waxaan ku shiday xaalad deg-deg ah waana taas
Ku jawaab luismen
José. Dhamaadka howsha waxaan ku guuleystey in aan dhigo xaalad deg deg ah laakiin waxaan layaabay in dhamaadka ay ii sheegto inaan la cusbooneysiin karin. Nidaamka waxaa lagu fuliyay 3 jeer iyada oo loo marayo habka degdegga ah waxna ma qaban doono?
Moobiilkeyga ayaa soo dejinaya ... ku dhowaad saacad oo waxba ma taro, maxaan sameyn karaa? (Waan ogahay in mar horeba la faaleeyay, laakiin ma arki karo farriimihii hore ...)
Ku jawaab xD_avid
Waa inaad ka furtaa oo aad dib ugu bilowdaa xaalada degdega ah: mugga hoose ee badhanka + badhanka kamarada + badhanka xiritaanka) iskuna day markale, hadii aysan wali waxba qaban, markale isla qaliinka samee laakiin sidoo kale dib u bilow pc iyo barnaamijka, waxay lahayd sidan oo kale aniga dhowr saacadood illaa aan sidan ka yeelo oo ay aniga ii shaqaysay, waxaan rajeynayaa inay ku caawinayso
Magaalada Odin waxba kama arko wax ku saabsan maapigga dekedda com, maxaan sameeyaa?!?!
Waad salaaman tahay, markaan ku xiro taleefanka kombiyuutarka, Kies ma aqoonsana, runtiina waxay i siisaa farriin oranaysa "Kies ma taageerto qalabka". Maxaan ka qaban karaa?
Waa la cusbooneysiiyay? Kies waxay aqoonsan tahay spica kaliya haddii ay yihiin nooca 2.1
Sidee tihiin dhamaantiin waxaan qabaa spica-ka movistar venezuela waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii cusbooneysiinta 2.1 ay horay u jirtay mahadsanid
Ku jawaab joonis
Waxaan ka heystaa spica-ka movistar Peru Samsung wuxuuna ii soo diray farriin ah in cusbooneysiintan cusub aan laga sii deyn doonin Latin America
Ku jawaab robert
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Samsung gt-i5700 oo ka socota Digitel GSM Venezuela waxaanan jecelahay inaan cusboonaysiiyo nidaamka… Fadlan, ma ii sheegi kartaa haddii cusboonaysiinta ay timid sideen u cusbooneysiiyaa?
Mahadsanidiin kahor !!!
haa :) dijo
my msn waa maty_mellib@hotmail.com . Waxaan jeclaan lahaa inaan arko haddii qof ila soo xiriiri karo sababtoo ah waxaan iibsaday samsung i7500 waxaanan jeclaan lahaa inaan cusbooneysiiyo (waxay leedahay 1.5), waxaan jeclaan lahaa in loo helo msn qof garanaya inuu ila soo xiriiri karo madaama aan raacayo talaabooyinka markaad sameysid cusbooneysiinta. Aad baad u mahadsantahay!
Jawaab haa :)
Saaxiibbo fiidkii wanaagsan, waxaan ka imid Venezuela, Samsung Samsung-na wuxuu ka tirsan yahay Movistar, waxaan rabaa inaan u qaato nooca 2.1 laakiin wakiilka waxay ii sheegeen in soo saaruhu uusan sii deyn noocaas, miyaan sameyn karaa cusbooneysiintan aad tilmaamayso, iyadoo aan wax dhibaato ah? Mahadsanid, waxaan rajeynayaa caawimaaddaada ...
Waad salaaman tahay Oscar, hadaad sameyn karto dhibaato la'aan, horay ayaan ugu sameeyay dhowr aalad .. su'aashu waxay kujirtaa dammaanad qaadka qalabka hadii kale ama aad salka ku sidatid asalka asalka ah ansax ma ahan, waxaan u iri maxaa yeelay Waxaan la shaqeeyaa Movistar oo waxaan ku sameeyaa xaaladaas qaabka cusub ee soodhalaha leh launchers kala duwan ama mawduucyada u muuqda oo si aad u wanaagsan u shaqeeya
Ku jawaab angelinoox
Haye, cabsi weyn haysa, maxaa yeelay markii cusbooneysiinta la dhammeeyay, wuxuu ii soo diray fariin qalad ah oo aan la sheegi karin wuxuuna i weydiiyay daaqad si aan u sameeyo cusboonaysiinta xaaladda degdegga ah ama haddii kale aan aado wakiil Samsung ah oo idman, Taasi waa, taleefanku wuu madhnaa, waxaan aaday xaalad deg-deg ah, oo ah inaad taleefanka ka furto dekedda USB-ga ka dibna riix: mug (-) + badhanka kamaradda + badhanka awoodda, farriin ayaa ka muuqata asalka madow ee taleefan, ka dib waxaan dib ugula xiriiray dekedda USB halkaasna waxay ahayd inaan ku cusboonaysiin karo cusbooneysiinta, runtii cabsi aad u weyn oo i qaadata !!!! allaa mahad leh dhamaantiin wanaag 🙂
fadlan waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo samsung i5700-kayga illaa android 2.1 aad baad u mahadsantahay.
Ernesto oo u dhashay dalka Argentina.
Ku jawaab ernesto
Waxaan haystaa gt 5700L oo waxaan rakibay istuduwaha cusub ee pc-ga wax kasta oo hagaagsan, wuu gartaa aaladda, laakiin ma muujinayo cusbooneysiinta
Waxaan rajeynayaa caawimaad degdeg ah
Ku jawaab briiancito
Halkee ka timid? Tan waxaan u weydiinayaa sababtoo ah nasiib daro kuwa ku nool Latin America ma helayaan cusbooneysiinta qaab rasmi ah, waxaan aad uga baqayaa hadii aad ka soo jeedo deegaankaas inaad la dagaalanto barnaamij la yiraahdo Odin iyo samdroid roms (tusaale ahaan iyo Aad ayey ufiican yihiin) Wax walba waxaad kaga raadin kartaa google halkaasoo aad ka heli karto barnaamijyada lagama maarmaanka u ah aadna aad loogu sharxay.
fiid wanaagsan, saaxiibayaal, waxaan kuu soo iibiyay samsung spica GT-5700 oo ah shirkadda DIGITEL.
Soo dejiso barnaamijka ay dhahaan, waxaan ku xiraa mobilka laakiin markaan siiyo si aan u cusbooneysiiyo waxay dhahdaa ma jiraan wax cusbooneysiin ah oo la heli karo.
waxaa jira qaab kale oo lagu cusbooneysiin karo ama barnaamij ikhtiyaari ah.
Waan ku faraxsanahay caawimaadda: carlos2003_85@hotmail.com
Nasiib darro Latin America ma jiri doonaan wax cusbooneysiin ah ... laakiin waad booqan kartaa boggan oo aad ku haysato dhammaan barnaamijyada iyo casharro lagu cusbooneysiinayo
hello waxaan hayaa samsung spica istuudiyaha samsung PC waan garawsaday laakiin waxaan idhi wax cusbooneysiin ah ma jiraan SIDEE AYAAN UGU Cusboonaysiiyaa 2.1 ?????
Fiiri faallooyinka, halkaas ayaa looga jawaabaa.
dhab ah dijo
sxb waan kuu sheegi doonaa, waxaan ku cusbooneysiiyaa spica-kayga habka odin, waa mid aad u fudud waxaanan kugula talinayaa inuu google in yar galo waadna heli doontaa hadaanan kaaga tagin emaylkeyga: avefenix_55@hotmail.com
Ku jawaab larreal
Saaxiibbo wanaagsan, waxaan rajaynayaa inaad i caawin kartaan ... horeyba waan u cusbooneysiiyay aalado dhowr ah oo ay kujiraan tayda laakiin tan dambe waxay weydiisteen raalli ahaanshaha, pc-ga ayaa dib loo bilaabay dhexda lagu rakibayo feylasha iyadoo odin ah hadana taleefanka ma sameeyo ku soo bilow shaashadda q Samsung ayaa leh om ayaa soo baxaya qm dic kale oo ah inaan ku xiro taleefanka kombiyuutarka aan sameeyo oo aan galiyo qaabka rarka ee barnaamijyada ama softiweerka si ay odin shaqadeeda u qabato laakiin wax dhacaya ma aqaano waxa la sameeyo ama sida loo soo celiyo si ay ugu noqoto qaabkeedii hore ama dib u cusbooneysiinta mar kale .. Waxaan rajeynayaa jawaabo fadlan waad ku mahadsan tahay wada shaqeyntaada ...
Saaxiibayaal wanaagsan, waxaan sameeyay tillaabooyinka kor ii sheegaya, waxaan cusbooneysiiyay tallaabada 3, cusboonaysiiya daaqaddii hore, waxay ii sheegaysaa in mobiilku u baahan yahay in la soo celiyo, maxaan ku sameeyaa kiiskan, haddii aad i caawin kartaan, Mahadsanidin, waa deg deg
Haye, waxaan ka imid Venezuela waxaanan leeyahay galaxi spica. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii cusboonaysiinta softiweerka ah ee loo yaqaan 'android 2.1' la heli karo. Mahadsanidiin kahor !!!
hello waxaan sameeyay dhamaan talaabooyinka sida kor ku xusan waxaanan helayaa gt-i5700 l kaliya waxay taageertaa sifooyinka soo socda: qalabka cusbooneysiinta !! Marar badan ayaan isku dayay inaan qaabeeyo qolka laakiin wali ma awoodin, ma i gacan siin kartaa waxa igu dhacaya !! Mahadsanid!
Ku jawaab pamela
tag bogga samsung ee wadankaaga waxaa jira talaabadan oo talaabo talaabo ah oo cusbooneysiin ah runtii waa wax fudud waan ku sameeyay bogga venezuela maadaama halkaas aan joogo si kasta oo aan u ahay tani waa isku xirka http://www.samsung.com/ve/ raac talaabooyinka ay ku siiso iyo voila. wax kasta oo uu ii sheego oo aan ka caawiyo
Haye, sidoo kale waxaan ahay reer Venezuela, waxaan waalanahay iskudayo inaan cusbooneysiiyo android-ka ilaa 2.1, laakiin ma jirto wado lagu sameeyo, waxaan galay xiriiriyaha mana fahmin talaabooyinka aan qaadi doono. Fadlan i hanuuni.
Hellooo !! Waxaan isku dayayaa inaan cusbooneysiiyo GT-I5700, waxaan rakibay NewPcStudo, waxay muujisay in cusbooneysiin la heli karo, waxaan siiyay si aan u cusbooneysiiyo qalabka, waa la soo degsadaa, wax walba waa hagaagsan yihiin laakiin markii aan cusbooneysiinaayay waxay ii sheegaysaa inuu qalad jiro dhacay, waxaan u siinayaa dariiqa soo kabashada degdega ah ee VolumeLow, Camera iyo Power furayaasha waxaana helay asal madow oo leh sawir kaarka xusuusta ama jab iyo fariin buluug ah oo leh ha dansan taleefanka oo ah Ingiriis, I Waxaan sameeyay kun jeer waxna ma jiraan Haddana taleefankayga gacanta ma doonayo inuu bilaabo, haddii aan ka furo oo aan daarto, inta badan waxaan helaa sawir taleefanka gacanta ah, meel laga naxo (!) iyo kombuyuutar.! Ma aqaan wax aan sameeyo! Ma ogi inay waxyeello gaadhay! Fadlan si deg deg ah uga jawaab !!!
Ku jawaab Mariangelica
Waa salaaman tahay, su'aal baan qabaa, ma aqaano sida dhabta ah ee loo badbaadiyo barnaamijyadayda aan soo dejiyey, haddii ay ku jiraan xusuusta gudaha iyo in kale, sidee baan u abuuri karaa keyd? waayo markaan cusbooneysiiyo android-ka si aan u helo codsiyada aan mar kale soo degsaday?
Ku jawaab luismen87
Su’aashaydu waa tan soo socota… suurta gal ma tahay in WhatsApp lagu rakibo Samsung Galaxy Spica, ma u baahan tahay cusbooneysiin ama nooc cusub oo wax ah? maxaa yeelay waxaan dhowr jeer isku dayay goobo kala duwan welina ma sameyn karo
Ku jawaab karina
Isla sidaas oo kale ayaa igu dhacda. Waxay umuuqataa inaad kucusbooneysiineyso taleefanka android 2.1. Waxaan hadda soo dejinayaa Kies si aan isugu dayo inaan cusbooneysiiyo qalabka. Haddii aan helo waxa ay qaadaneyso, waan kula soo socodsiin doonaa.
Karina Casas dijo
Waan ku qanacsanahay ... mar horaba waan ka fikiray cusbooneysiinta laakiin waxaan isku dayay inaan u sameeyo sida kor lagu sharaxay waxaanan helayaa qalad sida ay sharaxday Mariangela 2 faallooyin ee kor ku xusan .. mana aqaano sida kale ee loo sameeyo. !!
Jawaab Karina Casas
Sideen ugu dhejin karaa lambarada xiriiriyaheyga cabir weyn, aad ayey u yar yihiin, ma ila talin kartaa, mahadsanid
waan ogahay dijo
Dhibaato ayaan ku qabaa qolka waxaan soo dagsaday istuudiyaha pc ee cusbooneysiinta samsung spica galaxy wax walbana sifiican ayey u socdeen ilaa aan ka gaadhay talaabada sedexaad ee cusbooneysiinta waxaa ku harsaneyd buluug buluug ah oo diyaar u ah inuu dhameeyo halka qaladku ka yimid waxaan rabay keydi cusbooneysiinta ka jarista taleefanka waxaan bilaabayaa talaabada labaad hadana hada meesha ugama tagayo waxaana ugu sii darnaa dhamaanba in taleefankayga hada uusan dooneynin inuu galo ama qoritaanka uu ku haray ereyga samsung. Su'aashaydu waxay tahay maxaan sameeyaa !!!!!! waxay noqon doontaa inay ku dhaawacantay
Ku jawaab yose
nolosha venezuela ma noqon doonto mid qadhaadh, ku samee bogga samsung.com.ve
halkaas ayaa cusbooneysiintu ka soo baxeysaa, waxa xun ee waqti dheer ku qaadanaya in la cusbooneysiiyo taasna waxay kuxirantahay xawaaraha internetka ee ay hayaan. Nasiib ayaan leeyahay waan arkay, waxaanan ogaaday inay tani tahay nooca 2.1 ... hahah menu ayaa aad uga wanaagsan inay wax ka beddeleyso wax kasta oo ka dambeeya beIN XD oo aan lagu siri doonin halkaas oo ay ka qaadaan sida 200bs oo ah wax si fudud loo cusbooneysiin karo iyo waxaa ku siinaya samsung-ka bogga weyn ee wadankaaga ,,, nasiib xD
Ku jawaab Antonino
CHAMO, WAAN KU SAMEEYAY SAMSUMG VENEZUELA PAGE WAANA SAMEEYAY WAX KASTA OO SI FIICAN SII DHAMMAAD DHAMMAADKII UGU DANBEEY M QALAD AYAA KA SOO BAXDAY WAQTIGII AAN AQOONSANAHAY SIDII AAN U SAMEEYN LAHAA WAAYO WAXA AAN SAMEEYAY TALLAABO LOO SAARAY 5 jeer iyo MAYA WAXYAABO ,,, = (HAHA CIDNA MA AY II TAHAY
Saaxiib durba waan soo galay boggaas waxaanan ka furay meesha ay ku qorantahay cusboonaysiin laakiin anigu waxaan ahay Shiineeys maxaa yeelay ma aqaano waxaan sameeyo oo sanduuq ayaa yaalla laakiin waxba sharraxayaa, fadlan i caawi.
Salaan baa jira! cusbooneysii spica-ga ka dibna markii ay dib u bilaabanto waxay umuuqataa inay laalaaban tahay astaanta samsung iyo baarka hoos loo sii rakibayo horayna aan waxba u qaban! I caawi!!
ubaxyo linen ah dijo
Subax wanaagsan, waxaan hayaa samsumg spica 5700 mana maqli karo dadku markay i soo wacaan, hadii qof ogaado sida aan u samayn karo, waan uga mahadcelinayaa taas, ubaxyo ka soo baxa Venezuela, mahadsanid.
Ku jawaab ubaxyada geed linenka ah
wanaagsan, waan ogahay inaysan waxba ka qabanayn laakiin waxaan dhaqaajiyay ikhtiyaarka ah inaan ku helo emaylka jawaabaha iyo faallooyinka dhibaatadayda ee cusboonaysiinta galaica spica ee aan ku galiyay golahan, hada taleefanka ayaa jabay umana baahni mar dambe inay hesho wax kale majiraan, sidee loodejiyaa ????????? Ma aqaano sida looga helo shabakadda… ..
hello waxaan hayaa samsung bal II waxaa loo keeni karaa 2.1 ==== ???? Waad ku mahadsantahay horay
Ku jawaab benito
WAQTIGAN AYAAN SAMEEYAA WAKHTIGA .. WAA JAAHIL LAAKIIN WELI MUUJIMIN Qalad KALAD AH ...
Jawaab ku calaamadee
PC-ga waa Windosw 7, waxayna kugula talinayaan in cusbooneysiintu ay kujirto XP .. Ilaa iyo hada wax walba oo caadi ah .. Waan kula socodsiinayaa sida ay ku dhacday .. Taleefoonkeygu waa GT-i5700l .. Galaxy Spica.
Qofna ma xaqiijin karaa haddii ay horey u xalliyeen arrinta cusbooneysiinta halkan Isbaanishka? Miyuu jiraa qof ka socda Orange ama Yoigo oo cusbooneysiiyay dhowaan?
Iima oggolaan doonto inaan idhaahdo looma baahna in la cusbooneysiiyo, laakiin iima oggolaaneyso inaan soo dejiyo whatsaap.
Waxaan hada cusbooneysiiyay sansung GT-i5700 wuuna fiicnaa mar horena waan soo dejinayaa whatsaap wax walbana waa ku dheereeyeen tan Venezuela bogga sansung.com.ve.
Waad salaaman tihiin. Waxaan ka imid Venezuela mana awoodin inaan cusbooneysiiyo galkayga. Ma ii sheegi kartaa bogga aad ka soo dejisay pc-ga cusub. Midkood oo ka mid ah boggaga aan soo dejiyey ma aqoonsana moobilkeyga. Ama ii sheeg haddii loo baahan yahay talaabooyin dheeri ah. Sugeisy@gmail.com Waa mailkeyga. Fadlan ii caawin….
dabada 17 dijo
Miyaad cusbooneysiisay sida halkan ku qoran? Waxaan jeclaan lahaa inaan cusbooneysiiyo si aan sidoo kale ugu isticmaalo whatsapp halkaas
Ku jawaab elnegro17
Qof kasta oo ka socda Orange oo horeyba u awooday inuu si rasmi ah u cusbooneysiiyo?
Waxaan haystaa Simyo oo codsiyada midkoodna ma aqoonsana taleefankayga.
Fantastic, wax walba oo kaamil ah. Aad baad u mahadsantahay.
Fran 546 dijo
haye waxaan u arkaa in aaladdu aysan la jaan qaadi karin ... Waxaan haystaa spica GT-i5700 ama taleefanku ma aqbalo barnaamijyada aan sameyn karo !!! = ??
Jawaab Fran 546
Waad salaaman tihiin ,, waxwalba waan tirtiray ,, wax walbana waan sameeyay marki aan cusbooneysiiyay barnaamijka samsung new pc wuxuu igu dhahaa "kuma xirmikaro adeega", mar dambe ma aqaano hadii aan wax khaldan sameeyo oq ,, mahadsanid. .. maxaan sameeyaa fadlan ka jawaab
Ku jawaab EmaArg
helloaa, markaan isku dayo inaan cusbooneysiiyo waxay ii sheegtaa inaan wax cusbooneysiin ah loo baahneyn… fadlan helpoooooooorrrrrr
fiiri markii cusbooneysiinta xiriirada la tirtiray
Waxaan la dagaallamayaa "Venezuela" dijo
Subax wanaagsan dhamaantiin, cusbooneysiintan ayaa rasmi u ah pica waxaan sameeyay shan jeer waana amaan 100%, soo degso barnaamijyada yar yar iyo barnaamijyada softiweerka taleefanka updates. qolka iwm, maxaa ku siinaya inay baaraan ama nuqul ka sameeyaan qiimaha shabakadda waddan kasta iyo shirkad taleefan u leh shabakadda xogta ay ku isticmaali doonaan cirbadaha their .. fiiri….
Jawaab Lucho "Venezuela"
Higaaddaas hubaal ahaan waa mid aad u ammaan ah!
Markii hore waxaan soo dajiyay cusbooneysiinta markii unugyadu dib u bilaabeenna waxay ku sii jirtay calaamadda bilowga "Samsung" iyo sida shaashadda barnaamijka PC STUDIO u yiri ha u jarin waxaan uga tegey sidan in ka badan 2 saacadood dhammaadka waan ku daalay sugitaan iyo fursad qaado. Waan ka jaray oo markale ayaan isku xirey waxayna i siisay QALADKA 1aad (Ka gaabinta rakibida cusbooneysiinta) waxaan siiyay daaqada u muuqatay "soo celinta" hadana waan isku dayay markale wax ka yar 10 daqiiqo ayaa horeyba loo cusbooneysiiyay! 😀
Ma i caawin kartaa fadlan maxaa yeelay 1.3 ma soo degsato ama ma aqoonsana, taleefanka gacanta ayaa leh ma diiwaangashan yahay, 1.5-na wuxuu leeyahay wax cusbooneysiin ah ma jirto, ma i caawin kartaa fadlan waan waalanayaa
Ku jawaab micaaaa
Tecnologiaglobal Gl dijo
Sida aan ku sharaxay waa amaan, waa inay lahaadaan istuudiyaha samsumg pc lakin ha socodsiinin, xira kormeerka barnaamijkan iyo inuusan shaqeyneynin marka taleefanka la xirayo ……. wax kasta oo kale oo leh Odin Multi Downloader, tanna cusbooneysiintu ma qaadan doonto wax ka badan 5 daqiiqo…. ku midooba Windows 7
Jawaab Tecnologiaglobal Gl
Fadlan ma i caawin kartaa maxaa yeelay waxay dhaheysaa waa inaan soo dejiyaa studio pc cusub 1.3 mana aqoonsana aniga 1.5na waxay ii sheegaysaa inaysan jirin wax cusbooneysiin ah, fadlan ma i caawin kartaa?
Ku jawaab mica
Aniga sidoo kale iima shaqeyneyso, waxay umuuqataa isku mid ... aaladdaadu ma diiwaan gashantahay ama wax lamid ah ... = /
Ku jawaab Ruben
Dhibaato ayaan qabaa, Samsung-kayga waa la cusbooneysiiyay laakiin waxaan sameeyay isbeddel qashin ah oo SIM-du imika ima aqoonsan tahay, sidee ayaan taleefanka uga shaqeeyaa?
Ku jawaab Belen
Sideed u cusbooneysiisay ????
Nic Contreras dijo
Habeen wanaagsan, sidee ayaan u cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy Gti-7500 oo aan ka adeegsadaa nidaamka qalliinka 1.5 illaa 2.1?
Fadlan ii caawin
Jawaab Nic Contreras
eeg waxaan haystaa spica galaxi waxaan siiyay dib udajin warshad waana qaboojineysaa kama gudbeyso shaashadda guriga madaama aan sameeyo markale.
hadaad xal hayso ii soo dir psanzhn@yahoo.com
Ku jawaab Psanzhn
Waxaan hayaa i5700 spica oo taabashadu ma shaqeyneyso, waa maxay sababta?
Ku jawaab nico
Waxba ma fahmin
Ma cusbooneysiin karo, markii ay cusbooneysiineyso waxay joogi doontaa 0% ka dibna waxaan helayaa fariin "ku guuldareysiga rakibidda cusbooneysiinta" waxaanan horeyba isugu dayay inaan sameeyo dib-u-dejinta adag laakiin wali waa isku mid, ma cusbooneysiin karo 🙁
Putooo waxba ha ii sheegin siil
Mr lisa james dijo
Miyaad u baahan tahay deyn si aad deyntaada isaga bixiso ama aad ganacsi u furato? hadday sidaas tahay fadlan maanta noo soo dir: transferfunds00@hotmail.com wixii macluumaad dheeraad ah
Ku jawaab Mr Lisa james
Zeemote waxay soo saartay SDK-keeda Android
U samee kumbuyuutar kuu gaar ah aaladdaada